Shiinaha Venetoclax 1257044-40-8 soosaarayaasha iyo alaableyda | CPF
Venetoclax 1257044-40-8 CLL Abbvie Juun. 27,2031
维奈 妥 拉 Venetoclax 1257044-40-8 Guriga Gudihiisa
VCL-6A 98549-88-3 Guriga Gudihiisa
VCL-7A 1235865-75-4 Guriga Gudihiisa
VCLM2 1228780-72-0 Guriga Gudihiisa
VCLM2-2HCl 1628047-87-9 Guriga Gudihiisa
VCLM3 1228779-96-1 Guriga Gudihiisa
GMagaca guud: venetoclax (ven ET oh klax)
Magaca Brand: Xidhmada Bilowga ee Venclexta
Venetoclax waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo lempmia lempmia daba dheeraata ama lempmia leukemia yar yar ee dadka waaweyn. Venetoclax waxaa loo isticmaalaa kali ama lagu daraa dawooyinka kale ee kansarka si loo daweeyo xaaladahan.
Venetoclax waxaa loo isticmaalaa iyadoo lagu darayo azacitidine, decitabine, ama cytarabine si loogu daaweeyo myeloid leukemia daran. Isku darkaan waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee jira 75 sano ama ka weyn, ama aan isticmaali karin daaweynta kiimiko ee caadiga ah xaalado kale oo caafimaad awgood.
Venetoclax mararka qaarkood waa la bixiyaa ka dib markii daaweyno kale ay ku fashilmeen.
Venetoclax sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin aan ku xusnayn tilmaamahan dawadan.
Venetoclax (ABT-199; GDC-0199) waa mid aad u karti badan, xul ah iyo hadal ahaan bioavailable Bcl-2 inhibitor leh Ki ka yar 0.01 nM. Venetoclax waxay dhalisaa autophagy.
Venetoclax (ABT-199) waxay si xoog leh u dishaa unugyada FL5.12-BCL-2 (EC50 = 4 nM), Venetoclax (ABT-199) waxay muujineysaa dhaqdhaqaaq daciif ah oo ka dhan ah unugyada FL5.12-BCL-XL (EC50 = 261 nM). ABT-199 sidoo kale waxay muujineysaa xulashada unugyada mammalian-ka ee laba-isku-dhafan, halkaas oo ay carqaladeynayso dhismooyinka BCL-2-BIM (EC50 = 3 nM) laakiin waxay aad uga waxtar yar tahay BCL-XL-BCL-XS (EC50 = 2.2μM) ama iskudhafyada MCL-1-NOXA.
Kadib hal qiyaas oo afka ah oo ah 12.5 mg halkii kiilo ee miisaanka jirka ee xenografts oo laga soo qaatay RS4; unugyada 11 (DHAMMAAN), Venetoclax (ABT-199) waxay sababtaa ka hortagga koritaanka burooyinka ugu badan (TGImax) ee 47% (P <0.001) iyo koritaanka burooyinka daahitaanka (TGD) ee 26% (P <0.05) .
Daaweynta xenografted la aasaasay (qaabka jiirka xenograft ee T-ALL cell cell LOUCY) burooyinka leh Venetoclax (ABT-199) 100 mg / kg 4 maalmood waxay keeneysaa hoos u dhac weyn culeyska leukemic.
Hore: Velpatasvir (PVP)